Android qabashada Screen - 1 click inay sameeyaan qabashada screen on Android
> Resource > Android > Android Screen Ciidamada: 1 click la Sameeyo Ciidamada Screen on Android
Marka aan u ciyaareynay qaar ka mid ah kulan xiiso leh ama daawashada filimaanta weyn, waxaan mararka qaarkood waxay jecel yihiin in ay qabsadaan Screenshot qaar ka mid ah wallpapers, ama aad rabtid inaad la wadaagto dadka kale. Way fududahay in shaqo haddii aad ka shaqeeya computer ah, halkaas oo waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo. Ama xitaa la iPhone, ood karaan shaashada si fudud u wada cadaadinaya badhamada xoog iyo guriga. Laakiin sidee baad u qabsadaan screen on Android ? Ma jiro shaqo sida ku OS Android in kuu ogolaanayaa inaad waxaas u yeeshid. Laakiin kuma boodaan .... Waxaad dhab ahaan si fudud u samayn karaa, xitaa si ka fudud on iPhone, sababta oo ah waxaad u baahan tahay oo dhan si ay u sameeyaan waa guji mar.
Iyadoo Wondershare MobileGo for Android , waxaad si fudud u heli kartaa telefoonada Screenshot la click fudud. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, fadlan ka Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Hadda download it iyo Raac tallaabooyinka hoose.
Fiiro gaar ah : Hagaha hoos ku isticmaala Screenshot version Wondershare MobileGo for Android Windows. Habka ugu dhammayn aad hawsha ku Mac dhow waa isku mid. Kaliya u hubso aad soo bixi version saxda ah sida ay xaaladdaada.
1-riix screen qabashada Android
Ka dib markii ay soo degsado Tababaraha this Android, waxa maamula on your computer, iyo xirmaan telefoonka Android ama kiniin barnaamijka kombiyuutarka la cable USB ah ama iyada oo Wi-Fi (WiFi kaliya loo isticmaali karaa in version Windows.). Just ay doortaan sida aad doorbidayso. Markaasay aad ugu interface ugu weyn ee MobileGo for Android.
On this interface ugu weyn, screen telefoonka waxaa lagu soo bandhigay sida ay dhab ahaantii u egtahay. Marka screen isbedel aad telefoonka ee, kaliya riix "Refresh" button in la beddelo shaashadda si ay u dhigma telefoonka.
Markaas riix "Screenshot" button in lagu soo qabto mid aad rabto.
Hadda waxaad ku dhameysatay ka qabashada screen on Android, oo aad ku haysan karto on your computer ama la wadaagga kuwa kale online. Haddii aad rabto in aad u telefoonka aad Android, taas Tababaraha Android sidoo kale kaa caawin karaan in ay sameeyaan.
Guji "Add file ama gal". Hadda waxaad dooran kartaa Screenshot aad qabtay si ay u dajiyaan in telefoonka aad Android.
Ka sokow Screenshot qabtay, Waxa kale oo ah tababaraha file Android fududahay in la isticmaalo, taas oo kaa caawin kara si loo maareeyo waxyaabaha aad Android sida xiriirada iyo gurmad SMS iyo kala iibsiga, Apps rakibidda iyo uninstalling , iyo files multimedia wareejinta dhexeeya telefoonka aad Android iyo kombiyuutarka.
Daawo video tutorial hadda.